Ptengine: Pisa Mepu, Campaign, Shanduko Yekutevera uye Ongororo | Martech Zone
Ptengine: Pisa Mepu, Campaign, Shanduko Yekutevera uye Ongororo
Svondo, Zvita 27, 2015 Mugovera, July 8, 2017 Douglas Karr
Nepo akawanda analytics mapuratifomu pamusika zvisaririra zvetekinoroji anopfuura makore makumi maviri ekuberekwa, matekinoroji matsva anotarisa zvakanyanya pahunhu hwevashandisi uye nekushandura fanera ongororo. Heathermaps inzira dzakakwana dzekuona mashandisiro evashandisi nekufamba kwenguva neako saiti dhizaini, kufamba uye kufona-kune-chiito. ptengine inopa muunganidzwa wematurusi akavakirwa zvakanangana nezvinangwa izvi.
Yekupisa Mepu Kuongorora - Enzanisa mepu dzekupisa pakati pemapeji akasiyana, nguva dzenguva, uye zvikamu zvisina muganho kuti utarise maitiro akasiyana evashanyi.
Dzvanya Heatmap - Ratidzira tinya data ine thermographic visualization, ichipa kukurumidza uye nyore kunzwisiswa kwevaenzi maitiro.
Cherechedza Heatmap - Dhata rakaunganidzwa rinopa humbowo hwekuti vashanyi vanotarisa zvakadii, zvinobatsira kuona zvakanakisa kushambadza, zvinopa ruzivo rwakakosha pakugadzira nekugadzirisa mapeji ekumhara, kudzikisira kusiiwa kwengoro yekutengesa, kunowedzera kutendeuka kwemafomu epamhepo, uye inofungidzira mashandisiro achaita vashanyi webhusaiti yako mune ramangwana. .
Multi-Dhizaini Kuongorora - inoteedzera uye kuongorora data kubva kumidziyo yese uye inotsigira masosi akavakwa neanoteerera dhizaini.
Kuongorora Peji - chakasimba chekuongorora chishandiso chekutora iyo nhamba yekudzvanya kubva kune zvinofambidzana uye zvisingaite-zvinhu. Zvisinei nechinhu chacho, wana nzwisiso yeiyo chaiyo nhamba yekukenya pane ako mabhatani, mifananidzo, mavhidhiyo, kudonhedza pasi mamenu uye nezvimwe.
Mupumburu Reach Mepu - yekufukidza tinya uye tarisa mapapu ekupa moto kuti upe iyo chaiyo muzana yevashanyi vachipuruzira kune zvimwe zvikamu zvepeji rako. Wana nzwisiso yakazara yekuti sei vashanyi vako vari kuenda kana vangogara pasi pawebhusaiti yako.
Boka Analytics - Uchishandisa Musoro weMatch, End Match, uye Regex, Ptengine inopa nzira dzakasiyana dzekuongorora mapeji ane zvinhu zvakafanana, seshangu dzine mavara akasiyana, mota dzine akasiyana mamodheru, zvinyorwa nevanyori vakasiyana, mapeji anomhara ane akasiyana ma URL. Sevha nguva yakashandiswa pakugadziridza iripo danidziro URL.
mishandirapamwe - gadzira mushandirapamwe URL (kana enzanisa zviripo), uye ongorora traffic nemazita, sosi, svikiro, izwi, uye zvemukati.
Shanduko Mafuri - Dzidza kupi uye nei vashanyi vachimira kushanya kwavo, uye mafambiro avanoita pawebhusaiti yako. Nyorera Ptengine's Heatmap analytics kune yako Shanduro Yekushandisa uye shandura vashanyi kuva vatengi.
Chaiye-Nguva Yevashanyi Ongororo - unganidza data pane imwe nguva mushandisi traffic, zvichikugonesa kuti uite nekukurumidza uye nekubudirira kushambadzira kugadzirisa.
Kuongorora kwenzvimbo - Munguva chaiyo, tarisa vashandisi nzvimbo dzenzvimbo
Mushanyi Details - tarisa data rese rakakosha revashanyi panguva imwe chete, senge zviitwa, zvemukati kufamba, anoshanda masisitimu, mabhurawuza ewebhu, uye mapeji ekutumira.
Saina Chikumbiro cheMahara Muedzo
Tags: kutarisa kupisa mepukutarisa heatmaptinya kupisa meputinya heatmapkupisa mepu analyticsmamapu ekupisaheatmapptengine